Canyon Viewpoint Luxury Retreat | Iphuli + Spa - I-Airbnb
Canyon Viewpoint Luxury Retreat | Iphuli + Spa
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguScott
Indlu yedolophu entle nephumlileyo eyi hub yakho yokuphonononga i-Utah eseMazantsi! Ime ngokufanelekileyo kufutshane neZion National Park, Sand Hollow & Quail Creek Reservoir, kunye neendlela ezingapheliyo zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile! Ngezinto eziluncedo ezibandakanya ibhafu eshushu kunye neendawo zegalufa ezikufutshane, kukho into yomntu wonke. Yenzelwe onke amaqela afuna ukubaleka kwaye avuselele kwakhona!
Sifuna uzive ukuba eli likhaya lakho kude nekhaya. Uyakonwabela indawo yethu evulekileyo, ifanitshala etofotofo, kunye namagumbi enzelwe ukuphumla kunye nokuvuselela.
Yonwabela ukuntywila kwi-tub eshushu eshushu okanye imijikelo embalwa kwindawo yokuphumla. Thatha ujingi kwi-Sunbrook Golf Club kanye kumnyango olandelayo. Hlala ngasemva kwaye uphumle ngaphandle ngasese kunye nendawo engaphambili efakwe ngaphambili.
Vuka kwibhedi entle elingana nokumkani kwigumbi lokulala elikhulu elibanzi. Yonwabela iTV okanye uphumle kwishawari enkulu yamatye okanye ibhafu ebanzi. Indawo ye-massage ye-in-suite, izihlalo ezitofotofo, indawo yokusebenza ezinikeleyo, kunye nefenitshala yasekhaya ikwenza uzive usekhaya.
Emva kokuba ubuyile ekhaya uvela kuhambo lwakho lwemihla ngemihla, indawo egqibeleleyo yokuphumla yindawo yokuhlambela egcwele ngokupheleleyo. Inayo yonke into oyifunayo ukuze ucoceke ngokukhawuleza! Ibandakanya ibhafu / ishawa, iitawuli, ishampu, iconditioner, ukuhlamba umzimba.
Lungiselela isidlo esimnandi esiphekwe ekhaya emva kokuhamba uhambo olude losuku okanye ukudlala igalufa ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo. Uyakonwabela ukusebenzisa izixhobo zethu ezitsha zentsimbi engatyiwayo kuyo yonke into oyifunayo. Hamba nekofu kusasa kwaye akukho mfuneko yokuthenga iplastiki okanye iphepha lokutyela impahla. Sinayo yonke into! Yonwabela isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa ngokutsala isihlalo kwitafile yokutyela.
Yenza iinkumbulo kunye nokuhleka ngokuzonwabisa kunye neencoko ezinentsingiselo kwindawo enkulu yokuhlala ekhululekile kwigumbi lokuhlala. Ukuzinkcinkca-zibukele imiboniso bhanyabhanya oyithandayo kwiTV enkulu okanye udlale imidlalo kunye. Ngeetoni zokuhlala, kukho indawo yomntu wonke!
Yiphephe imisebenzi eyongezelelekileyo xa ufika ekhaya ngokulisebenzisa ngokupheleleyo igumbi lokuhlambela impahla. Iipod zokucoca kunye neeshiti zokomisa zibandakanyiwe.
Kwaye ukuba ujonge ezinye izinto ezonwabileyo onokuthi uzenze kukho iRingQ kunye neNets on Fire kanye ecaleni kwendlela ene-roller skating, ijim ye-ninja, kunye nenkundla yebhola yomnyazi. Kukwakho neemasaji ezinyibilikisiweyo eziyinkonzo epheleleyo yosuku lwe-spa. Nceda uzive ukhululekile ukufikelela nangaliphi na ixesha ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya kwezi ngokunjalo!
Sinayo yonke into oyifunayo ukuze ukhululeke! Kuninzi ekufuneka uyenzile, uya kufuna ukubhukisha uhambo lwakho olulandelayo ngaphambi kokuba uhambe. Uya kuhlala ubuya kumdaka ngakumbi obomvu kwihempe yakho nakwizihlangu zakho!!